Shirweynihii ugu horreeyay ee Ganacsatada Sinocare ayaa si guul ah ugu qabsoomay magaalada Delhi-News-Sinocare
Shirweynihii ugu horreeyay ee Ganacsatada Sinocare ayaa si guul ah ugu qabsoomay magaalada Delhi
Waqtiga: 2019-08-16 Hits: 270
Intii lagu guda jiray Maarso 2-3, 2019, Shirweynihii ugu horreeyay ee Ganacsatada Sinocare ayaa lagu soo bandhigay Delhi sida loo qorsheeyay. Iyada oo qayb ka ah hamiga Sinocare ee ah in la balaadhiyo suuqyada dibada ee 2019, tababarkan amarkan wuxuu xambaarsanyahay fikradeeda horumarineed ee "si xowli ah u sii kordheysa, iyo la baareynta suuq u heellan" sanadka 2019 si looga qaado talaabooyin dhameystiran dhinacyo kala duwan si loo bixiyo adeegyo tayo leh oo loogu talagalay macaamiisha dibada ah isla markaana la siiyo xoog leh kalsoonida shuraakada Hindiya.
Shirkani wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: tababarka ganacsatada, iyo wada-hawlgalayaasha ganacsatada.
Intii lagu gudajiray tababbarka ganacsadaha, kooxda biologiyada ee Sinocare oo uu matalayay Dr. Cai Xiaohua, Madaxa Sayniska Sinocare, iyo Mr. Xiang Bo, Agaasimaha Suuqyada Caalamiga ah ee Sinocare, ayaa la wadaagay kooxaha iibka caanka ah ee Hindida qorshaha wax soo saarka shirkadda, falanqaynta wax soo saarka, fikradaha summada iyo qorshaha horumarinta suuqa si ay si fiican ugu iibin karaan badeecooyinka suuqa ku yaal isla markaana ay u bixiyaan adeegyo iibka ka dib ka wanaagsan.
Shirka wada-hawlgalayaasha ganacsadaha, badeecada ugu weyn ee shirkadda - AQ Smart, waxay sumcad weyn ka heshay wakiillada Hindida iyo la-hawlgalayaasheeda tayada ugu wanaagsan. Hal saac un ka dib markii siyaasada la iibiyay wakiilada la siidaayay, waxay heshay in ka badan 10 amar oo wadar ahaan ka badan 15 milyan oo rupees Hindi ah.
Waqtigaan la joogo, Hindiya waxaa ku nool dad ka badan 1.3 bilyan tirada dadka qaba cudurka macaanka waxay ka badan tahay 75 milyan. Kadib shan sano oo horumar ah oo ay Hindiya ka sameysay Waaxda Sinocare ee Caalamiga ah ee Iibka, waxqabadkeeda iibku si joogto ah ayuu u labanlaabmay. Sidaa darteed, waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah ganacsiga suuqa caalamiga ah ee shirkadda.
Iyagoo wajahaya dad aad u tiro badan oo qaba cudurka macaanka ee Hindiya, Sinocare waxay had iyo jeer gudan doontaa masuuliyaddeeda bulsho si ay u soo bandhigto alaab tayo sare leh iyo xalalka Hindiya, oo ay ku darsato waxtarkeeda saxda ah ee ka hortagga iyo daaweynta sonkorowga.
Bogga Hore: Sinocare waxay kaqeyb qaadatay CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA THAILAND 2019
Bogga Dambe: Wadashaqeynta 2018 Sinocare iyo YUELU SUMMIT 2018